ISAKRAMENTI YOBHAPTIZO NENKQUBO YAMAKRISTU
Umthendeleko woBhaptizo, yile nto sizakuthetha ngayo kweli nqaku liphela, apho siza kufumanisa ukuba iqukethe ntoni le sakramente nokuba kutheni ibaluleke kangaka kumaKatolika. Ke ndicebisa ukuba uqhubeke ufunda ukuze ufunde okungakumbi ngayo.
1 Umthendeleko woBhaptizo
1.1 Yintoni ubhaptizo?
1.2 Kwenzeka Ntoni Emva Kokubhaptizwa?
1.3 Ukubaluleka komthendeleko wobhaptizo
1.4 Iimpawu zeSakramente yoBhaptizo
1.5 Izinto zeSakramente yoBhaptizo
El umthendeleko wobhaptizoAyisosiko nje uninzi lwethu olungasokuze lusikhumbule, kumaKristu asamkelayo nakumntu wonke yisakramente. Iisakramente luphawu olubonakalayo lukaThixo emntwini ozifumanayo.
Xa sisiza kuthetha ngobhaptizo uphawu olubonakalayo emntwini ngamanzi agalelwa kwiintloko zeentsana. Kodwa oku kunentsingiselo enkulu esiza kuyichaza ngokweenkcukacha apha ngezantsi.
Ubhaptizo ngumsitho owenzelwe wonke umntu, apho samkelwe ecaweni kwaye sithi ndlela-ntle kulowo isono sokuqala. Bonke abantu banakho ukufumana i umthendeleko wobhaptizoNokuba ayibhaptizwanga, ingafunyanwa nanini na ebomini bomntu, ukusuka kusana olusandul 'ukuzalwa okanye umntu osele emdala.
Xa kubhiyozelwa umthendeleko wobhaptizo, kwamkelwa ecaweni, icawe iyintsapho yababhaptiziweyo, kuba ngokwesiko sonke sizalwa sinebala lesono santlandlolo kwaye oku kuyapheliswa ngokubhaptizwa.
Intsingiselo yegama ubhaptizo kukuntywilisela kwaye isenzo esenziwe emanzini sinokuthetha izinto ezininzi, esiza kuthi zikhankanywe apha ngezantsi:
Xa umntu egxunyekwe emanzini luphawu, kuba uyazika ukufa zikaYesu.
Xa ikhutshwe emanzini, ibonisa uvuko lweNkosi yethu.
Xa kuziwa emntwaneni okanye kumntu omdala, ukutshiza amanzi kubonisa isimboli esifanayo njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
Kuba ukuzalwa ngokutsha kwenzeka ngamanzi nomoya kaThixo.
Kwenzeka Ntoni Emva Kokubhaptizwa?
Ukususela kuloo mzuzu ukuya phambili, okufunwayo kukukhula kokholo nobabalo, ngothando lukaThixo, olufunyanwa kwikhondo lobomi. Kule ndlela yokukhula ngokomoya ukuyibiza ngandlela thile, kufuneka iqhubeke nezinye iisakramente ezinje:
Kwaye umthendeleko wokuqinisekisa.
Zonke zizezinjongo zokomeleza ukholo emntwini, kuba uxanduva lomntu wonke kukukhula elukholweni ebomini, kungenxa yesi sizathu izithembiso ezenziwayo ngexesha umthendeleko wobhaptizo Ziyahlaziywa minyaka le ngexesha le-Easter Vigil. Kuba loo mnqweno wokukhula umanyene noThixo uhlaziywa kanye ngonyaka.
Kule nkqubo apho ukholo kuThixo luqala ukukhula, amanani oothixo kunye nothixo wobhaptizo adlala indima ebaluleke kakhulu. Kuba aba bakhethwe ngabazali okanye ngabakwaKatechumen (obengumntu oza kufumana ubhaptizo) ukuba bamkhaphe ubomi bakhe bonke kwaye bamncede agcine olo kholo kuThixo luphilile ubomi bakhe bonke.
Umsebenzi ofanayo uzalisekiswa ngabazali, kodwa bafumana uncedo ngonqulo lobhaptizo kunye no-godmother. Yiyo loo nto umsebenzi wabazali ubaluleke kakhulu kubomi babantwana babo, njengoko bebakhokela kwindlela elungileyo, ukongeza ekubancedeni bahlakulele olo kholo kuThixo, kuba yena ngokwakhe wasinika loo ntsikelelo yokuba abantwana bethu kwaye kufuneka sihlakulele uthando kutata wethu wasezulwini.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Umthendeleko woMtshato.
Ukubaluleka komthendeleko wobhaptizo
El umthendeleko wobhaptizo Kubaluleke kakhulu emntwini, kuba imele umKristu into yokuba uqala ukulandela uThixo kunye neemfundiso zakhe. Ngapha koko, noYesu wabhaptizwa ngamanzi, ngeli nyathelo usimema sonke ukuba silandele indlela yakhe nayo yonke into awayeze kusifundisa yona.
Iimpawu zeSakramente yoBhaptizo
El umthendeleko wobhaptizo Inempawu ezithile esiza kuthi sinike iinkcukacha ngazo apha ngezantsi:
Lo mthendeleko waqala ngabapostile.
Umthendeleko unamagama aliqela anje ngala: ibhafu yokuhlaziywa ngokutsha kunye nokuhlaziywa komoya oyingcwele, ukhanyiso okoko umntu obhaptiziweyo esiba ngumntwana wokukhanya, kodwa esoloko enenjongo enye.
Bonke abantu ababhaptiziweyo, nokuba ngabantwana okanye ngabantu abadala, bangaluhlaziya ubhaptizo lwabo rhoqo ngonyaka kumlindelo we-Ista.
Nawuphi na umntu ongabhaptizwanga angabhaptiza, ukuba nje uyahambelana nomgaqo wobhaptizo.
Ubhaptizo luya kuba luphawu olusisigxina, ukuba singabenkosi yethu umdali kwaye uyasisikelela.
Izinto zeSakramente yoBhaptizo
El umthendeleko wobhaptizo Inothotho lwezinto ezibaluleke kakhulu ukuze ubhiyozelwe:
Sixelelwa ngombandela kwisakramente yobhaptizo apho imelwe ngamanzi.
Ngokubhekisele ekubeni lenziwa njani na eli siko, eNtshona la magama asetyenziswa "Ndiyanibhaptiza egameni" kwaye eMpuma kuthiwa "Isicaka sikaThixo sibhaptiziwe."
Ukuze oku kwenziwe, kufuneka kubekho umlungiseleli, obesakuba ngubhishophu, umbingeleli okanye umdikoni.
Kufuneka kubekho umntu oza kubhaptizwa.
Kuya kufuneka ubenaye u-godfather kunye no-godmother.
Kwaye okokugqibela, injongo yokubhaptizwa kukuxolelwa kwezono.
Ukuqukumbela eli nqaku, sinokuthi umthendeleko wobhaptizo Ngaphandle kokuba luphawu lwentsikelelo kaThixo phambi kwethu, emelwe ngokwesiko lobhaptizo. Kwaye apho kufunwa khona umntu ebomini bakhe ukomeleza ukholo lwakhe kuThixo nasecaweni.
Kungenxa yoko le nto sichaza ngokweenkcukacha ukuba yintoni umthendeleko wobhaptizo, kwenzeka ntoni emva kokubhiyozela umntu obhaptiziweyo kunye neesakramente ezilandelayo ekufuneka sizifezekisile. Ukongeza, sibenze bazi ngokubaluleka kwale sakramente ingcwele kwiCawa yamaKatolika kunye neempawu zayo, kunye nezinto eziyinxalenye yalo mthendeleko ubalulekileyo wecawe.
Ndiyathemba ukuba bonke abakhankanywe ngasentla basebenza njengesikhumbuzo sokubaluleka kweli nyathelo, ukulibeka ngandlela thile, kuye wonke umntu, apho afumana khona intsikelelo kaThixo ngabameli bakhe ebandleni. Kwaye ukubaluleka kokuqhubeka nokukhulisa olo thando ngoThixo, kunye nokulandela iimfundiso ezishiyekileyo kuthi ukuba sibe ngabantu abangcono phambi koThixo.